Izolile, ipholile kwaye iphakathi - I-Airbnb
Izolile, ipholile kwaye iphakathi
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguLouise
Indawo yokuhlala epholileyo kwaye ezolileyo kwindlu enomtsalane engama-50 enebalcony kunye nengca enkulu ngasemva. Imizuzu emihlanu ukusuka eNoila ngemoto kunye nomzuzu omnye ukusuka kwisikhululo sikaloliwe sase-Umeå kunye nedolophu esembindini, ebekwe kwindawo evaliweyo yendlu eHaga edumileyo.
Igumbi elipholileyo nelizolileyo kwiHaga edumileyo, indawo yokuphosa ilitye ukusuka kuloliwe- kunye nesikhululo sebhasi. Ukuhamba imizuzu emihlanu ukuya kumbindi wedolophu, i-10 min ukuya eyunivesithi ngebhasi okanye ibhayisekile.
Ukuhamba ngobuhlobo kwaye kufutshane neHagaparken. Imizuzu embalwa yokuhamba umgama ukuya kwisikhululo sebhasi kunye neziko apho "yonke into" yenzeka khona. Iivenkile, iivenkile zokutyela, iindawo zentselo. 10 min ibhayisekile okanye umgama webhasi ukuya eyunivesithi.
Kufuphi kakhulu kumbindi wesixeko, 3 min ukuhamba. Apho uya kufumana iindawo zokutyela, ii-pubs, ukutya- kunye neevenkile zempahla. 10 min ukuya eyunivesithi ngebhasi okanye ibhayisekile.
4.77 · Izimvo eziyi-95
Indawo ezolileyo kwindawo edumileyo yedolophu, kufutshane nombindi wesixeko.
Imizuzu eli-10 ngebhayisekile ukuya eyunivesithi nasesibhedlele.
5 imizuzu ukuhamba ngebhasi, kunye 5 min ukuya eyunivesithi etc ngebhasi.
Abamelwane abalungileyo :-)
Indawo ezolileyo yendlu evalelweyo kwindawo edumileyo.
Imizuzu eli-10 yokukhwela ibhayisekile ukuya eYunivesithi nasesibhedlele.
Kufuphi nepaki kunye nehlathi elineendlela zokuzilolonga.
Kufuphi nebhafu kunye nejimu.
Ndifuna uzive ukuba apha ungakhululeka.
Igumbi elithe cwaka, ndidla ngokubakho apha xa kukho into ofuna ukuyibuza.
Ndingakuxelela kancinci malunga neziganeko zangoku kunye nendlela yokufumana e-Umeå.
Ungaphumla apha, kuthe cwaka kakhulu. Ndidla ngokuba lapha ngorhatya, ukuba unqwenela ukubuza into. Ndingakunceda ufumane indlela yakho njl.
Ndingakuxelela kancinci malunga neziganeko zangoku kuny…